ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်း (၈ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်) | MoeMaKa Burmese News & Media
မရှိတော့တဲ့ကောင်းကင် (Zay Hmine)
ရဲရင့်သက်ဇွဲ - ငြိမ်းချမိးရေးလဲ သွေးသံရဲရဲ
မင်းကောင်းချစ် - အ၀ိဉာဏက လုပ်သား
ကျော်ဟုန်း - အိုး ... နိုဝင်ဘာ
နီဇူလိုင် - စိုးစိတ်
ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်း (၈ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၂
Design – Ko Myoe
သူငယ်ချင်း မင်းသွားနှင့်တော့ ငါတို့လိုက်ခဲ့မယ်
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်
ပေးပို့ခဲ့ကြတဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း သဝဏ်လွှာများကို
ကြေကွဲခြင်းများစွာဖြင့် ရှစ်လေးလုံးမိသားစုမှ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါတယ် …။
ရှစ်လေးလုံး နာမကျန်းဖြစ်နေစဉ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ
အထူး ဂရုစိုက်ကြပ်မတ်ကုသပေးခဲ့သော နှလုံးရောဂါကုအထူးကုဌာန (ရှစ်လေးလုံး ပြန်လည်ထမြောက်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့ချုပ်) အား
မောင်ရှစ်လေးလုံးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်
ယခင်ဘဝ ရှေးကုသိုလ်ကံ အဆက်ဆက်ကြောင့်
သူ၏ ယခုဘဝတွင် အမျိုးမျိုးသော
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်၍
၂၀၁၂ ၌ တကြိမ် ….
၂၀၁၅ ၌ တကြိမ် ….
ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဆန်းပိုင်းမှစပြီး
ဝေဒနာများကို အလူးအလဲ ပြန်လည်၍
သူ၏ တိုင်းပြည် သူ၏လူမျိုး
အပြီးတိုင်စွန့်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ………
ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ကြေငြာအပ်ပါသည်ခင်ဗျား ….။
One Response to ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်း (၈ ရက်၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
soesoe on September 9, 2012 at 9:42 pm
ဟာ..စိတ်မကောင်းစရာဘဲဗျာ ထင်တော့ထင်သားဘဲ သူ့ ရဲ့ ခန္တာသူ့ ရဲ့ နှလုံး သူ့ ရဲ့ ကျောက်ကပ်တွေကိုစစ်အစိုးရဆီမှာဖဲ့ရောင်းနေကတည်းက သူ(8888) မကြာခင်နေဝင်တော့မယ်ဆိုတာ..တရားနဲ့ သာ ဖြေကြပါတော့ဗျာ…..မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနဲရပါကြောင်း…………..